တိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်ပျက်စီးလွယ်ဖြစ်နှင့်ကျယ်ပြန့်အထီးကျောနောက်သို့ဝှက်ထားရန်လိုသည်ဖြစ်သောကြောင့်, နောက်ကျောတက်စုပ်ကူညီပေးသောကွာခဏလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်စိတ်ဝင်စားအမျိုးသမီးများနေ့။ လေ့ကျင့်ခန်း back ကြောင်းထင်မြင်ချက်ကကြီးမားစေမည်, သင်အမှား masculine ။ ကျောအဘို့ကိုပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းဖျော်ဖြေ, သငျသညျ, အဆင်းလှသောကိုယ်ဟန်အနေအထားအရအားကောင်းလာစေရန်လိမ့်မယ် ကျောရိုး ဝမ်းဗိုက်တင်းကျပ်, ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက်နှင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားစပ်လျဉ်းဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖန်တီးသောရန်ကြွက်သားလည်းမရှိ, သူတို့ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေနှင့် lumbar ပါဝင်သည်။ ပြားချပ်ချပ်အစာအိမ်ဖြစ်လာဖို့ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများအတွက်, သင်ပြန်လွှဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကြွက်သား dumbbells ပြန်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းအနည်းငယ်ကိုကြည့်ကြရအောင်။
အဆိုပါဆင်ခြေလျှောများတွင်ထိုး dumbbells ။ ခြေဘဝါးပခုံးအကျယ်မပါဘဲဒူးတို့ကိုအနည်းငယ်ကွေးပြန်ဖြောင့်, ပခုံး, မိမိလက်၌အ dumbbells လျှော့ချနေကြသည်။ 45 °တစ်ခုထောင့်မှရှေ့ဆက်အထက်ကိုယ်ထည်စောင်း။ တဖြည်းဖြည်းခါးပတ်ဖို့ dumbbell တင်းကျပ်, ပြီးတော့သူ့ရဲ့မူရင်းအနေအထားကိုပြန်သွားပါ။ အဆိုပါတံတောင်ဆစ်ချိုးဆွဲ၏အချိန်မှာနောက်ကျော, ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းညွန်အတွက်ကောင်းစွာ သွား. , မဟုတ်သေချာပါစေ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း , နောက်ကျောကိုသာကြွက်သားသယ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားပါ။
ဘေးထွက်မှ dumbbells ၏မွေးမြူရေး။ ခြေဘဝါးပခုံးအကျယ်မပါဘဲဒူးတို့ကိုအနည်းငယ်ကွေးပြန်ဖြောင့်, ပခုံးချကျဆင်းခဲ့။ ကျနော်တို့တံတောင်ဆစ်ချိုးမှာရင်ဘတ်အဆင့်မှာလကျကိုအနည်းငယ်ကွေး, 45 °တစ်ခုထောင့်မှရှေ့ဆက်ကိုယ်ထည်ကိုလျှော့ချ။ ဖြည်းဖြည်းချင်းအဖြစ်ကျယ်ပြန့်နိုင်သမျှဆိတ်ကွယ်ရာလက်၌ပျော်, ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းမူရင်းအနေအထားကိုပြန်သွားပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုသင် dumbbells သုံးပြီး latissimus dorsi စုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ရှေ့ဆက်အမှီ။ ဆိတ်ကွယ်ရာသင်တို့၏ခြေကိုပခုံးအကျယ်နှင့်အတူမတ်တပ်ရပ်, ပြန်ဖြောင့်, ပခုံး, မိမိလက်၌အ dumbbells လျှော့ချနေကြသည်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းအနေအထားကိုစတင်မှပြန်လာပြီးတော့, ဒူးကွေးမပါဘဲရှေ့ဆက်တတ်နိုင်သမျှသင့်ခန္ဓာကိုယ်စောင်း။ လေ့ကျင့်ခန်းစဉ်အတွင်းသင့်ကျောပတ်လည်၌မထားပါနဲ့။
20-25 ကြိမ်တစ်ခုချင်းစီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်နှငျ့သငျအိမ်ပြန်သည့် dumbbells တက်စုပ်နိုင်သောမမေ့မလြော့ပါ။ သင့်လက်၌ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပ!
Triceps - အမျိုးသမီးများအဘို့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု
တစ်ဦးစာရေးကိရိယာဆိုင်ကယ်ပေါ် interval လေ့ကျင့်ရေး
တိုတောင်းဆွယ်တာအင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
HIV ပိုးကူးစက်မှုကို - ရောဂါလက္ခဏာ
အပြီးအစီးသောအသွေးကို count က - ကလေးများအတွက်ကုဒ်ဖြုတ်
Karelia - ဆွဲဆောင်မှုများ